SIDEE LOO SAFEEYAA SAQAFKA GACMAHAAGA: ROOGE, BURAASH IYO BUUFIN. ISKU KALSOONOW NADIIFIN LEH FAARUQ IYO LIME GURIGA. SHAQADA FURIINKA - SAMEE NAFTAADA
Diyaarinta saqafka xoqida
Ka hor inta aan shaqada la qaban, waa lagama maarmaan in la diyaariyo qolka: ka saar alaabta dheeraadka ah ama ku dabool caag, ka saar nalalka, farshaxan, xarkaha, diyaarinta qalabka iyo alaabta.
Ka saar cirbadihii hore
Si aad u codsatid cadaan cusub, waa in aad marka hore ka saarto daaha hore. Habka ugu awoodda badan waa inuu ku dhaqo biyo. Si arrintan loo sameeyo, qoyan meel yar oo saqaf ah adoo isticmaalaya burush, rooga ama buufin. Marka lakab hore u bararey, waxaa lagu xoqay maqaarka, spatula, ama xoqan. Hawlgalkani waxaa lagu fuliyaa dhammaan qaybta saqafka.
Waa muhiim! Si kor loogu qaado saamaynta ka saarista, qaar ka mid ah citric ama acetic acid ayaa lagu dari karaa biyaha.
Joodarkii hore ee hore ayaa si dhakhso ah looga saari karaa iyada oo la isticmaalayo mashiinka dhagxaanta.. Si kastaba ha noqotee, xaaladdan, waa in aad ka ilaaliso indhahaaga iyo xubnaha neef-mareenka boodhka.
Ka qaadista raadadka cayayaanka
Ka dib markii lakabka rinjiga la dhammeeyey, saqafka ayaa si taxadar leh loo baari karaa dhoobada, xiirta, dufan iyo dhar kale.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sida rinjiga hore looga saaro derbiyada iyo qalajinta waraaqaha.
Raadinta iyo darbiyada rusheeyaha waa la maydhi karaa iyadoo la joojin karo sulfate copper. Xirmooyinka joogtada ah waxaa si fudud loo dhaqaa biyo, iyo soot waxaa lagu nadiifiyaa xal of hydrochloric acid (3%).
Xaydhka waa la saaraa iyadoo la mariyo soodhada oo biyo diirran.
Nadiifinta nadiifinta iyo nadiifinta waa muhiim kahor habka nadiifinta qolka., laakiin si siman loo wada dhajiyo, dhammaan saqafka waa in la dayactiro, hagaajinta dildilaaca iyo cilladaha kale ee leh shimbiraha ku salaysan cement.
Qulqulka qabsashada ayaa lagu duubay cajalad gaar ah kadibna macmacaan. Marka saqafku uu qalalan yahay, mashiinka waxaa lagu daaweeyaa waraaqo xoqan waxayna ku dhejiyaan midab. Ka dib marka ay qoyaan (ma aha wax ka badan hal maalin) ma shaqeeyaan.
Ma taqaanaa? Ha iyadoo lehKalluumeysiga "dayactirka" - xididdada Faransiiska, asal ahaan waxa ay ahayd inay la sameeyaan qaybo isboorti oo ciidan ah. "Dayactir" waxaa loola jeedaa in lagu bedelo fardo gaboobay gabdhaha.
Waxaa suurtagal ah in lagu daboolo saqafka leh fursado dhowr ah: iyadoo la tiiriyo foosto iyo lime. Qalabka labadaba waa kuwo deegaanka ah, laakiin mid waliba wuxuu leeyahay dhinacyo wanaagsan iyo faa'iido darro.
Qalabkani wuxuu ku habboon yahay kuwa ujeedadoodu tahay in ay gaaraan qoto dheer ee qoto dheer ee daahfurka. Goobidda dhismaha dhulka oo dhan waa la buuxiyaa heerarka nadaafadda iyo nadaafadda, ma keeno xasaasiyad iyo waa habboon oo lagu shaqeynayo dhismayaasha degaannada iyo goobaha gargaarka ah, iyo jidka loo maro.
Ka mid ah dhibcaha ee xal nabarka, waxaa haboon in la ogaado in waqti ka dib si tartiib tartiib ah u burburin, ka tago boodhka xad-dhaaf ah ee qolka. Intaa waxaa dheer, kaniinigaani ma aha mid aan biyuhu ahayn oo aan ku habooneyn in la dhamaystiro shaqada bacda iyo qolalka leh qoyaan badan.
Waa muhiim! Haddii saqafka asal ahaan lagu daboolay lime, markaa laguma talineynin in lagu daaweeyo jeesoore, taniyo markii dambe ee dusha sare laga yaabo inay u muuqato dhar, taasoo si weyn u dhimi doonta muuqaalka.
Maqaalkani wuxuu leeyahay tayada bakteeriyada sare. iska-caabinta wanaagsan ee qoyaanka iyo ma aha maskaxaha xun ee cilladaha korka yar.
Si kastaba ha noqotee, marka la dhammeeyo qolalka hurdada iyo gaar ahaan qolka carruurta waa in ay tixgeliyaan jawaabta shakhsi ahaaneed ee dadka deegaanka si loo helo lime biyo leh. Waxay keeni kartaa xasaasiyad.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u akhrido sida loo xakameyn karo xayndaabka daaqadaha xilliga qaboobaha, sida loo dhigo furaha iftiinka iyo korontada gacmahaaga.
Tayada iyo si siman, saqafka ayaa lagu dabooli karaa buufin, rooge ama buraash. Bilaabbeyayaashu waa inayan isticmaalin qoriga buufinta, maadaama ay jirto halis ah derbiyada ka soo baxa. Waxaa fiican inaad bixiso burushyada mudnaanta leh.
Waa in laga sameeyaa walxaha dabiiciga ah oo leh santuuq aan ka gaabanayn 15 cm Ka hor inta aan la dhameyn, dhowr saacadood, burushka ayaa lagu qooyay biyo si uu u noqdo mid aad u jilicsan oo xoog badan. Faa'iidada qalabka noocan oo kale ah - xoqan ka soo baxa si fudud ayaa loo dhaqaa.
Xidmuhu sidoo kale maaha mid xun kuwa bilowga ah. Waxay u oggolaanaysaa shaqo dhamaystiran oo tayo sare leh. Marka aad iibsanayso rooge, waa inaad daryeeshaa baalalka, kaas oo la furfuri doono.
Ma taqaanaa? Wixii dhagaxyo isku dhafan ee dhismaha Waddada Great Great of China, xal la isku daray Boorash bariis ayaa la isticmaalay.
Haddii aad hore u haysatid xirfad aad ku codsaneyso xalka ama meesha dusha sare aad u ballaaran tahay, waxaa fiican in la isticmaalo qoriga buufinta, qalabka nadiifinta ama rusheeyaha beerta.
Sidaas, walaxda waa la soo xulay, saqafka ayaa la diyaariyey, waxaad sii wadi kartaa geeddi-socodka daadinta.
Iyadoo lagu saleynayo walxaha la soo xulay, gaar ahaan diyaarinta xalka ayaa ka duwan.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sidii loo dhisi lahaa maqnaansho leh hawo-gedis, xashiishad, digaag digaag, veranda, iyo sidoo kale inaad sameysid gebebo, barxad beerta, kursi, pergola, barbecue, xayndaabka gacmahaaga.
Iyadoo lagu saleynayo foori
Si aad u diyaargariso xalka muruqa waxaad u baahan doontaa (10 sq. M dusha sare):
5 litir oo biyo diirran ah;
30 g oo ah koolada (najaarada ama PVA);
2.5-3 kg ee foorjiga;
15-20 g buluug (loo isticmaalo si looga hortago muuqaalka dhibco huruud ah).
Kooluhu wuxuu ku kala yaallaa biyaha, ka dibna jiirka waxaa lagu daraa oo dhamaadka buluug ku shubaa. Wax waliba waa isku dhafan oo hubi cufnaanta isku dhafka. Si taas loo sameeyo, waxaad qaadan kartaa mindi ama walax kasta oo birta ah. Waxaa lagu rusheeyaa isku dar ah oo la soo saaray. Haddii dareeraha gebi ahaanba biyo ka baxo iyadoo aan la raadin, ka dibna isku darka waa mid aad u dareere ahna waxaad u baahan tahay inaad ku darto foori.
Iskudhinaanta isku dar ah waa in ay ahaataa mid aan ku dhicin iyada oo aan laga helin sheyga.
Waa muhiim! Si aan u dhaafin xaddiga laabta, waxa lagu daraa qaybo yaryar, gaarista baahida loo qabo.
Lime ku saleysan
Wixii lime shaqada, waxaad u baahan doontaa:
lime - 2.5-3 kg;
cusbo la cuni karo - 70-100 g;
aluminium aluminium - 150-200 g;
Lime, milixda horay loo qooyay, iyo alum waxa lagu shubaa weel qashin ah oo kiciyey. Kadibna ku dar biyo diirran si aad u hesho 10 litir oo isku darka ah. Haddii la rabo, waxaad ku dari kartaa dhuubasho (aan ka badnayn 450-500 g).
Fiidiyowga: Cunto karinta derbiyada
Siyaabaha loo adeegsan karo xalka
Waxaa jira saddax siyaabood oo muhiim ah oo lagu dhejiyo saqafka. Dhammaantood way sahlan yihiin habka fulinta, laakiin qaar waa in la tixgeliyaa.
Inta badan, martida aan la martiqaadin waxay ku muuqdaan guryaha iyo guryaha gaarka loo leeyahay, taasoo keenta dhibaatooyinka martida. Baro sida loola macaamilo qashinka, baranbarada iyo aboorada.
Habka ugu fudud oo ugu caansan ee loo isticmaalo in lagu daboolo qalabka xashiishka yar yar ee jajabyada waa maklovitsa. Burinta nadiifinta weelka qashin-sameynta, waxay ka dhigaysaa dhaqdhaqaaqa W-shaxanka dusha sare, sidaas oo ay ku dhalisay lakabka dul saaran lakabka.
Marka la adeegsanayo xalka maklovitsa, waa in la xasuusnaadaa in heerka koowaad uu sareeyo daaqada, iyo kan labaad - lid ku ah, si aanay u dhaafin calaamadaha burushka.
Haddii aad ku rinjiyeeysid qalabkani, kaddibna furfuriddu waxay ku dhici doontaa flat, laydh iyo lakabyo ayaa la sameyn doonaa. Si loo gaadho saameynta la rabo, xalku waa inuu ku dabaqaa laba lakab. Lakabka labaad ayaa la isticmaalaa ka dib markii ugu horeysay ee dhogorta.
Kaliya hal rooge ma noqon doono mid ku filan. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay weel wax lagu xalliyo, shey kasta oo walaaqaya iyo saxaarada rinji gaar ah. Intaa waxaa dheer, waa inaad ku riixdaa burush yar si aad u daboosho saqafka ka soo goysyada - ma awoodi doontid inaad sameysid rooge.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee furaha:
Waxyaabaha loo yaqaan "whitewash" waa la keydiyaa;
dusha sare waa xitaa lakab, iyada oo aan lahayn lebbado iyo jarjarro;
wax buraash ah lagama tegin;
haddii qalabka lagu rakibay gacanta dheer, aan loo baahneyn talaabo;
waxqabadka sare ee goobaha waaweyn.
Waxaad codsan kartaa qalabka wax lagu buufiyo iyo kuwa buufinta (buufinta) ama nadiifiye (haddii uu jiro nuuc gaar ah). Haddii aad si sax ah u qaadato habka, waxaad helaysaa natiijo wanaagsan.
Qalabka ayaa sidan u shaqeynaya: Cadaadiska, hawada ayaa galaya qoryaha buufinta, waxay qaadataa qaddarka lagama maarmaanka ah ee caddaanka ah waxayna ku buufineysaa hawada.
Si loo xakameeyo socodka ranjiga, waxaa jira furitaan gaar ah oo ku saabsan falejada, inta lagu jiro xiritaanka iyo furitaanka taas oo xoojinta diyaargarowga diyaaradeed.
Ka hor inta rinjiyeynta xalku si fiican ayaa loo qasi karaa, ku shub weel weelna waa la xidhay.
Waa muhiim! Awoodda waa in marka hore la qoyo. Tani waxay xaqiijinaysaa adhesion wanaagsan ee isku dhafka dusha.
Ku dhajinta cadad koranto ah, hubi inaad kantaroosho dusha sare, isku day inaad ka hortagto muuqaalka dhibcaha, taas oo mar dambe keenta furiinka.
Si rinjiga u siman, ku buufis dhaqdhaqaaq wareeg ah. Xaaladdan, rasaastu waa in lagu hayaa fogaan ah 70-100 cm dusha sare.
Natiijo fiican, waxaad u baahan doontaa inaad codsato 2-4 lakab, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku dhuumato cillado yaryar.
Tiknoolajiyada xallinta xalka
Wax kasta oo habdhaqaaleed oo aad doorato, waxaa jira xeerar guud oo loo shaqeynayo:
Qalabka iyo qorraxda furan waa in la iska ilaaliyaa inta lagu jiro qalajinta. Haddii kale waxaa jira khatar aad u weyn oo rinjiga ku dhici doona.
Waxay ka fiican tahay in lagu soo rogo xaddidaad xaddidan saqafka qoyan. Ka dibna cadaanku si fiican ayuu u dhici doonaa, kama tagi doono lebbiska.
Ha ku degdegin. Laydhka waa in lagu dabaqaa wareegyada xitaa.
Inkasta oo habka la doortay ee dhamaystiran, waa in aad marka hore buraashid kala-goysyada iyo dhammaan geesaha, kadibna kaliya sii wad shaqada ugu weyn.
Ha ka dhigin halbeeg aad u dheregsan - is-bedelku waa inuu u eg yahay labeen dhanaan. Haddii kale, rinjiga ma soconayo si siman.
Lakabka laysku daro, dhammaan qaybaha waa la sifeeyaa, xor ka ah xakamaynta qashinka xad-dhaafka ah iyo buruqyada.
Waa lagama maarmaan in la dalbado in aan ka yareyn laba lakab, adoo eegaya inta u dhaxeysa tiknoolojiyada mid kasta. Sidaas darteed waxaad ku guuleysan kartaa dharka midabada.
Ka hor intaan la nadiifin waa suurad wacan in la gooyo gebi ahaanba. Kadib fursadaha furiinka iyo lebiska la'aanta ayaa sii kordhi doona.
Boodhadhka udhexeeya lakabyada waa inay ahaadaan 4-5 cm, taasi waxay ka badbaadineysaa meelaha aan la daboolin.
Ma taqaanaa? Chalk waa mid ka mid ah qaybaha dhulka qolofta. Boqolkiiba wuxuu ka kooban yahay - 4%. Iyo in ka badan 20% dhagaxyada sedexda ah waxay ka kooban yihiin caws iyo nuurad.
U hoggaansanaanta sharciyada ammaanka ayaa looga baahan yahay dhammaan noocyada dayactirka. Xaqiiqadu waa inaan laga reebin. First of all, waa inaad ilaaliso jirka, indhaha iyo xubnaha neefta. Sidaa daraadeed, dhammeystirida waa in lagu sameeyaa muraayadaha difaaca, neefsasho (waxaa lagu beddeli karaa faashad faashad lagu rusheeyey biyaha), gacmo gashi, dhar iyo dhar khaas ah (guud ahaan waa mid ku fiican).
Sida aad u arki kartid, gacmo furfuran oo gacmahooda ah ayaa suurtogal u ah qof kasta oo go'aaminaya inuu dego guryahooda. Kormeeridda xeerarka kor ku xusan, xitaa marwo ayaa dhammayn karta saameeynta si qumman.
Dib u eegista internetka:
Haddii saqafka la dhaqo ka hor intaan la nadiifin, waxaad ku shubi kartaa buufin. Haddii dhererka qaangaaruhu uu da 'weyn yahay, 90% xalalka ayaa ku dhici doona dhulka. Rakaabka ayaa noqon doona mid dhaqso badan oo fudud. 2 jeer.
Ku dhaq dharka hore, sababtoo ah waxaay abuurtay filim dufan, oo lagu qaso boodh iyo polymerized. Sidaa daraadeed, adhiga (qoryaha) ee qiiqa cusub ee la duubi doono ma jiri doono, wuxuu bilaabi doonaa wakhti go'an oo dillaac ah iyo duufaan dusha. Saqafka ayaa lagu daboolayaa cirbadda biyaha ee caadiga ah.
Dusha sare ee lagu rinjiyeeyay qalajintu ma samayso dhab ahaantii sababtuna tahay xaqiiqda ah in limeecada lakabka ah ee qayb ka mid ah cirifka ay leedahay qaybo ka mid ah qalabka antiseptic, xoqista dusha sare ma aha filim ay sameeyeen polymerization biyaha leysku kululeeyo, lakin lakabka lakabka ah ee la gooyo ee macdanta. Maareynta cadeyntu waa la samayn karaa iyada oo la adeegsanayo pigment minerals-ka-macaan, laakiin waxaan u maleynayaa inay adagtahay in la helo midab isku mid ah oo midabkiisu yahay, marka la isticmaalayo rinjiyadaha biyaha ku saleysan.